What Is Omega3Fatty Acid? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
OMEGA3fatty acids ဆိုတာ ဘာလေးလဲ?
OMEGA3fatty acids ဆိုတာ ခန်ဓာကိုယျက မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ Fatty acid အမြိုးအစားဖွဈပွီး တကယျတမျးတော့ ငါးကွီးဆီချေါတဲ့ အရာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ငါးအဆီတိုငျးကတော့ OMEGA3fatty acids မဟုတျပါဘူး။ ဒါဆို OMEGA3fatty acids ဘာကွောငျ့ လိုအပျပါသလဲ? ခန်ဓာကိုယျက OMEGA3fatty acidsကို မရှိမဖွဈလိုပမေယျ့ ထုတျလုပျဖို့ရနျ မတတျနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ OMEGA3fatty acidsကို ပွငျပအစားအစာကသာ ဖွညျ့တငျးရပါတယျ။
OMEGA3fatty acids ကို ဘယျကရသလဲ
ငါးစားတိုငျး OMEGA3fatty acids မရပါဘူး။ OMEGA3fatty acids ရနိုငျတဲ့ ငါးတှကေတော့ ကကတဈ၊ ဆျောလမှနျ၊ တူနာ စတဲ့ငါးမြိုးစိတျတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ OMEGA3fatty acids ငါးကွီးဆီအဖွဈလညျး သောကျသုံးကွပါတယျ။
OMEGA3fatty acidsဟာ သှေးကွောတှေ အဆိဖုံးတာ ကာကှယျပေးလို့ နှလုံးသှေးကွောသာမက အခွား သှေးကွောကဉျြးရောဂါတှကေိုပါ ကာကှယျပါတယျ
OMEGA3fatty acids က အဆဈယောငျလေးဘကျနာကို ပြောကျကငျးစနေိုငျသလား? အဲဒီလိုတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ OMEGA3fatty acidsဟာ အဆဈယောငျတာကွောငျ့ နာကငျြမှုကို သကျသာလြော့နညျးစတေယျလို့ လလေ့ာခကျြတှကေ ဆိုပါတယျ။ အဆဈပကျြစီးမှုကိုတော့ မကာကှယျပေးနိုငျပါဘူး။
OMEGA3fatty acidsဟာ ကယျလျဆီယမျဓာတျကို မွငျ့တကျလာစလေို့ အရိုးသိပျသညျးဆကျုလညျး မွငျ့တကျလာစတေယျလို့ လလေ့ာတှရှေိ့ထားပါတယျ။ ၆၅နှဈအထကျ အရိုးပှသူ အမြိုးသမိးတဈစုကို OMEGA3fatty acids ၃နှဈတာ တိုကျကြှေးပွိး စဈဆေးကွညျ့တဲ့အခါ အရိုးသိပျသညျးဆ မွငျ့တကျလာတာကို တှခေဲ့ရပါတယျ။
OMEGA3fatty acids ဆိုတာ ဘာလေးလဲ?
OMEGA3fatty acids ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Fatty acid အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းတော့ ငါးကြီးဆီခေါ်တဲ့ အရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ငါးအဆီတိုင်းကတော့ OMEGA3fatty acids မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆို OMEGA3fatty acids ဘာကြောင့် လိုအပ်ပါသလဲ? ခန္ဓာက်ိုယ်က OMEGA3fatty acidsကို မရှိမဖြစ်လိုပေမယ့် ထုတ်လုပ်ဖို့ရန် မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် OMEGA3fatty acidsကို ပြင်ပအစားအစာကသာ ဖြည့်တင်းရပါတယ်။
OMEGA3fatty acids ကို ဘယ်ကရသလဲ
ငါးစားတိုင်း OMEGA3fatty acids မရပါဘူး။ OMEGA3fatty acids ရနိုင်တဲ့ ငါးတွေကတော့ ကကတစ်၊ ဆော်လမွန်၊ တူနာ စတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် OMEGA3fatty acids ငါးကြီးဆီအဖြစ်လည်း သောက်သုံးကြပါတယ်။
OMEGA3fatty acidsဟာ သွေးကြောတွေ အဆိဖုံးတာ ကာကွယ်ပေးလို့ နှလုံးသွေးကြောသာမက အခြား သွေးကြောကျဉ်းရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပါတယ်
OMEGA3fatty acids က အဆစ်ယောင်လေးဘက်နာကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်သလား? အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် OMEGA3fatty acidsဟာ အဆစ်ယောင်တာကြောင့် နာကျင်မှုကို သက်သာလျော့နည်းစေတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေက ဆိုပါတယ်။ အဆစ်ပျက်စီးမှုကိုတော့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
OMEGA3fatty acidsဟာ ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကို မြင့်တက်လာစေလို့ အရိုးသိပ်သည်းဆက်ုလည်း မြင့်တက်လာစေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ၆၅နှစ်အထက် အရိုးပွသူ အမျိုးသမိးတစ်စုကို OMEGA3fatty acids ၃နှစ်တာ တိုက်ကျွေးပြိး စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ အရိုးသိပ်သည်းဆ မြင့်တက်လာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။